पेप्सीकोलामा लण्डनबाट आएका तीन जनामा कोरोनाको आशंका ! र्‍यापिड टेष्टमा पोजेटिभ देखियो – Janata Times
पेप्सीकोलामा लण्डनबाट आएका तीन जनामा कोरोनाको आशंका ! र्‍यापिड टेष्टमा पोजेटिभ देखियो
काठमाडौँ, बैशाख १
काठमाडौंको पेप्सीकोला टाउन प्लानिङस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका तीनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । १५ औं तलामा बस्ने आमा, छोरा र बुहारीलाई र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटमा परिक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो । उनिहरु तीनै जनालाई पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा लगेर भर्ना गरिएको छ ।
र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटमा परिक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि तीनैजनालाई पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएको र उनीहरुको स्वाब नमुना पिसीआर गर्नका लागि पठाइएको पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउन अघि सो परिवार लण्डनबाट नेपाल आएको हो । स्रोतका अनुसार उक्त परिवार सो चैत ५ गते लण्डनबाट फर्किएको थियो । अपार्टमेन्टमा बस्ने तीनजनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि सो बिल्डि‌ङलाई नै लकडाउन गरेर प्रहरीले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।
र्‍यापिड टेस्टमा आएको नतिजा शतप्रतिशत सही नहुन पनि सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । आइतबार र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएकी बाग्लुङकी एक महिलाको सोमबार पोखरामा गरिएको पिसिआर टेस्टमा भने नतिजा नेगेटिभ देखिएको थियो ।
Related tags : पेप्सीकोलामा लण्डनबाट आएका तीनमा कोरोनाको आशंका ! र्‍यापिड टेष्टमा पोजेटिभ देखियो
गुल्मीमा वृद्ध दम्पत्ती एउटै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला
कोरोना संक्रमण रोक्न यस्ता छन स्वास्थ्यमन्त्रीका ६ सुत्र
कोरोना संक्रमितलाई भेदभाव नगरी सहयोग गर्न आग्रह
झापाको सभालाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्वोधन गर्ने